မွေးနေ့ရောက်ကာနီး မိသားစုကို လွမ်းလို့ မျက်ရည်ကျခဲ့တဲ့ Sinon – XB Media Myanmar
ပရိသတ်ကြီးရေ Sinon ကတော့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းပြီး ရိုးသားပွင့်လင်းလှတဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးကြောင့် မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် ခြင်းကို ခံနေရတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ Sinon က မြန်မာပြည်ကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ သူတွေအတွက်တတ်နိုင်သလောက် လိုက်လံလှူဒါန်းပေးနေခဲ့တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေက လေး စားချစ်ခင်နေရသူပါ ။
မြန်မာပြည်ကိုချစ်သလို မြန်မာလူမျိုးတွေကိုချစ်တဲ့ Sinon ကတော့ သူ့ရဲ့အမိမြေဖြစ်တဲ့ ဖိလ စ် ပိုင်နိုင်ငံ ကနေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက်အခြေချနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ မိသားစုနဲ့ ခွဲခွာနေရ တဲ့ Sinon က လတ်တလောမှာတော့ မွေးနေ့ရောက်တော့မယ် မိသားစုကို အရမ်းလွမ်းတာပဲ ဆို တဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ မိသားစုကိုလွမ်းလို့ ငိုနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးကို စိတ်မကောင်းဖွယ် မျှဝေပေး ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ် ။
Thank you to all my myanmar fans for cheering me up! You all are my second family ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံက ပရိသတ်တွေက သူ့ရဲ့ဒုတိယမိသား စုပါ ဆိုပြီး ပြန်လည်မှတ်ချက်ရေးသားခဲ့ကြပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေကတော့ Sinon ကို နှစ်သိမ့် တဲ့ မှတ်ချက်တွေရေးပြီး အားပေးစကားတွေ ပြောခဲ့ကြပါတယ် ။
ပရိသတ္ႀကီးေရ Sinon ကေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကေန ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိေ နခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ႐ိုးသားပြင့္လင္းလွတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေလးေၾ ကာ င့္ ျမန္မာပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္ ျခင္းကို ခံေနရတဲ့ သူတစ္ေယာက္ပါ။ Sinon က ျမန္မာျပည္ကိုေရာက္ရွိေနခ်ိန္မွာ လိုအပ္ေနတဲ့ သူေတြအတြက္တတ္ႏိုင္သေလာက္ လိုက္ လံလႉဒါန္းေပးေနခဲ့တဲ့အတြက္ ပရိသတ္ေတြက ေလး စားခ်စ္ခင္ေနရသူပါ ။
ျမန္မာျပည္ကိုခ်စ္သလို ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကိုခ်စ္တဲ့ Sinon ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕အမိေျမျဖစ္တဲ့ ဖိလ စ္ ပိုင္ႏိုင္ငံ ကေန ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္အေျခခ်ေနခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ မိသားစုနဲ႔ ခြဲခြာေနရ တဲ့ Sinon က လတ္တေလာမွာေတာ့ ေမြးေန႔ေရာက္ေတာ့မယ္ မိသားစုကို အရမ္းလြမ္းတာပဲ ဆို တဲ့ စာသားေလးနဲ႔အတူ မိသားစုကိုလြမ္းလို႔ ငိုေနတဲ့ ပုံရိ ပ္ေလးကို စိတ္မေကာင္းဖြယ္ မွ်ေဝေပး ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္ ။
Thank you to all my myanmar fans for cheering me up! You all are my second family ဆိုတဲ့စာသားေလးနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပရိသတ္ေတြက သူ႔ရဲ႕ ဒုတိယမိသား စုပါ ဆိုၿပီး ျပန္လည္မွတ္ခ်က္ေရးသားခဲ့ၾကပါတယ္ ။ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ Sinon ကို ႏွစ္သိမ့္ တဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြေရးၿပီး အားေပးစကားေတြ ေျပာခဲ့ၾကပါ တယ္ ။
ဝါဝါအောင်နဲ့ အောင်ခိုင်တို့ဇနီး မောင် နှံကိုသီတင်းကျွတ်မှာသွားရောက် ကန် တော့ခဲ့တဲ့MRTV-4 မင်းသားချောနှစ် ယောက်